Ngezinga elandayo, izimo zokuphila ezisemadolobheni, ebonakala emoyeni gassy, imvelo abampofu, okuholela impilo ebuthaka, kanye nokulwa nengcindezelo njalo, ophoqelelwe abakhileyo megacities ukulahla konke futhi uphume edolobheni ithuba lokuphefumula umoya ohlanzekile sizungezwe nemvelo futhi abacabangi okuhlobene inkinga eqhubekayo kuyize.
Enye - ukuhambisa kusuka endaweni yezimboni angcolile endaweni yabadla izambane likaPondo ethule, ngaphandle umsindo wezimoto, izitimela izimboni, izinyoni ukucula kanye iphunga elimangalisayo Lilac entwasahlobo ebusika - ne ezitaladini onokuthula iqhwa olunothile wokuqhuma phansi kwezinyawo zakho, okuyinto ayisekho okuzwakala kulo muzi.
Air purifier - nesisekeli esisemqoka
Ngeshwa, hhayi wonke umuntu unethuba uphume edolobheni. Ngakho lokho, khona-ke, ayikho indlela sikwazi ukuphefumula ahlanzekile, hhayi angcolile, kubathinta ezithinta impilo emoyeni?
Phandle lapho, ke uzothola nawe muzi omkhulu ukuze ujike efulethini lakhe ku isiziba of elimnandi freshness zemvelo. Yebo, kukhona manje ithuba ukwenza ngcono izimo bese udala microclimate kahle ekhaya, ngaphandle kokuzabalaza, ngoba yilokhu abaqambi umsebenzi. Namuhla, ezobuchwepheshe zisenza ukusula emoyeni ukungcola ezilimazayo kusukela efulethini. Yiqiniso, idivayisi Awukwazi ukufaka lasolwandle nokuduma icula, kodwa nakanjani ukwenza umoya ohlanzekile. Sikhuluma emoyeni wokuhlanza emakhaya, futhi lesi sihloko thina kuzokusiza ukhethe idivayisi.
Kanjani i purifier emoyeni?
air purifier humidifier ngoba ifulethi - elingeyona inkimbinkimbi, kulula ukuyisebenzisa, akukho amakhono ezikhethekile ezidingekayo sesondlo. Uwoyela ubulala onke amagciwane emoyeni, nokusetshenziswa idivayisi kungaba ubani. Air purifier for yokungezwani komzimba futhi ngokuvamile imikhuhlane ukugula - nje godsend.
Umgomo we operation nge esikhiphekayo isihlungi iyunithi esekelwe emoyeni beshaya kuzihlungi akhethekile amaningana, kuye ngohlobo zalesi sithako. Ngokwesibonelo, ezinye zazo Ungasusa intuthu noma intuthu zokuhlala, abanye nihlanze ezintulini, impova, izinwele isilwane. Leyo mikhumbi emoyeni purifier zisebenzisa i-carbon, anezikhala, umshini photocatalytic. komoya amandla kungase kushintshwe nge izinkinobho noma ukushintsha esisogwini control unit noma kumodi auto.
Yikuphi purifier emoyeni kungcono?
Air wokuhlanza enezihlungi replaceable ukuthi kukhona kakhulu ziphoqa - imikhiqizo brand ezilandelayo: Daikin, Boneco Electrolux, Bionaire, Sharp emoyeni, Comfort, Air O-Swiss, Venta, Toshiba, Bork. Ngokuvamile, isinqumo esikhulu ungathola imodeli elihlangabezana nazo zonke izidingo. Izindleko - kusukela $ 80 kuya imodeli isizinda kanye $ 1,000 elite. Optimum emoyeni purifier for the efulethini - intengo $ 200-500 (nge inketho ezingeziwe ionization, futhi humidification) kokuba multi-esiteji yokuhlanza uhlelo kanye control panel.
onobuhle premium amelela integers isimo sezulu axhunywa kwelinye izindlu ezimbalwa amadivayisi ehlukene ngokwendlela ukusebenza ongasebenza eceleni noma kanyekanye.
Lapho ukhetha emoyeni uholwe izidingo zabo, kanti futhi ucabangele usayizi wendawo ufuna ukuhlanza imodeli ekhethiwe.
Futhi hoods ayatholakala emakhemisi esikhiphekayo ngaphandle kwezihlungi injongo yakho eyinhloko kuyinto ukuhlanzwa by odlula emoyeni ngokusebenzisa amanzi. Babuye ngokuthi "umoya ukugeza". Zibiza kancane ezibizayo.
"Air yokuhlanza" Obonisa run yayo ngokusebenzisa cartridges ezimanzi. Amadivayisi anjalo hhayi kuphela ukwenza emoyeni yokuhlanza kukho ukungcola, kodwa futhi ukwandisa okuqukethwe yayo umswakama amazinga elikhulu umuntu - amaphesenti 50-60.
Ngezinga eliphezulu ukungcoliswa kungcono ukusebenzisa umoya zokuhlanza ze ezindlini enezihlungi replaceable, kodwa uma umgomo wakho oyinhloko ukwandisa nomswakama egumbini, kulesi simo kufanele usebenzise humidifier.
abaholi emakethe, esikhiqiza emoyeni wokuhlanza
Namuhla, abantu abaningi bafuna ukuthenga best emoyeni purifier for efulethini. Sibutsetelo emakethe wamanje libonisa ukuthi ezithandwa kakhulu brand ezilandelayo: Boneco (220 $), AOS (250-500 $), Ballu (180 $), Venta (250-800 $). Ngoba intengo ungathola hhayi nje oyisibonelo, ehlanza futhi moisturizes emoyeni, futhi idivayisi enemisebenzi ne izinketho ezengeziwe elawula kunomsindo. Ngaphezu kwalokho, kukhona umsebenzi emoyeni magciwane ngesiliva, imodeli enikeziwe elawulwa kude.
Ukugcizelela izinga imikhiqizo okuhlanganisa umoya wokuhlanza, futhi okubaluleke kakhulu, babecela imali bafanelwe lemikhiqizo ezifana Cijela, futhi Daikin, kubi Aic wezindlu emoyeni. Imikhiqizo yalezi brand, ngaphezu kwakho konke, umoya ohlanzekile futhi elinamanzi humidification umsebenzi ozikhethela, okuyinto akuvimbeli babhekane kahle nge imisebenzi yabo. Umehluko uhlelo njengoba umswakama alikho, kuhluke kuphela ohlelweni yokuhlanza.
The best emoyeni wokuhlanza ze ezindlini Cijela isici zakudala HEPA Elihehayo, ionizer futhi deodorizing lemifanekiso, kuyilapho Daikin efakwe uhlelo nokuphathelene Flash streamer, okuyinto likuvumela ukuthi ususe uthuli, iphunga futhi nomzimba hhayi kuphela, kodwa futhi abhubhise ngempumelelo amagciwane, kuhlanganise igciwane umkhuhlane wezingulube.
Umenzi engcono professional of air wokuhlanza ubhekwa inkampani Swiss IQAir. Household emoyeni zokuhlanza wale nkampani babe HyperHEPA izihlungi, okuyinto izikhathi 100 esebenza kahle ezingaphezu kuka HEPA ezivamile.
Izihlungi emoyeni wokuhlanza
Hlunga - yingxenye esemqoka idivayisi purifier. Of uhlobo yayo incike ngezinga zokuhlanjululwa, futhi imishini ukusebenza. Ake sicabangele kabanzi mayelana nokuthi yini izinhlobo izihlungi asetshenziselwa ukuthi yimuphi kubo kangcono. Siqala isihlungi indawo, yokuhlanza izinhlayiya ezinkulu lokukhanda. Ziyakwazi anezikhala elula esihle. isihlungi okunjalo kuyadingeka ukuze kususwe uboya indawo, isihlabathi, fluff Poplar, izinwele. Lesi sihlungi futhi kuvimbela zedivayisi ngokwayo ekutholeni ngaphakathi kwalezi zinhlayiya. Njengoba usebenzisa kugridi isidingo zigezwe noma kwemijondolo ke ingasetshenziswa ngokuphindaphindiwe. Ukuze ukusebenza evamile imishini net kudingeka ukuba zihlanzwe kanye ezinyangeni ezingu-3.
Yamalahle adsorption isihlungi
Ukwakheka lesi sihlungi uye ocushiwe carbon adsorption isici elivame ukusetshenziswa impahla yokulwa ubuthi. Yamalahle adsorption izihlungi ngempumelelo iwukudambisa iphunga elibi lamanje emoyeni. Kodwa, ngeshwa, abazi ukuvikela oxides nitrogen eziqukethwe emoyeni ezisemadolobheni, ngakho asetshenziswa kuphela njengoba aphelele.
Ocushiwe carbon izihlungu ukuncela amanyela. Ngakho-ke, kufanele bafaka njalo. yempilo yabo ivela izinyanga 3 kuya onyakeni owodwa, izindleko - $ 30-40.
Lezi zihlungi asetshenziselwa i yokuhlanza okuthuthukisiwe ezijulile emoyeni, okuyinto eyenziwa kanje: emva electrode omuhle equkethe kugridi kahle icala uphoqelekile emoyeni, compounds ungcolisa ahlale phezu electrode ezimbi. Lokhu izihlungi esebenza ngokwanele ngamanzi ukuze iphinde isetshenziswe. kusimo ngokuyinhloko ukukhethwa we-ozone ngesikhatsi operation yabo. Lena igesi enobuthi kakhulu, naphezu magciwane yayo, ephulukisa izakhiwo.
Lezi zihlungi Uyi isiqinisekiso ephumelelayo futhi ezijulile yokuhlanza, okuyinto ngaphezu ukusebenzisa ekuphileni kwansuku zonke nazo elisetshenziswa amadivaysi ezokwelapha, laboratories yezokwelapha kanye nezikhungo. Lezi zihlungi efanelwe eziningi wokubuyekezwa okuvumelekile. Babamba kuze kufinyelele 97% we izinhlayiya allergenic kunangendlela 0.3 microns, futhi ezingcolisa ahlukahlukene. HEPA izihlungi - yesikhathi esisodwa, ukuphila konke - 1 unyaka, okwathi ngemva kwalokho kumele kuguqulwe. Izindleko - 25-35 zamadola.
Amandla kanye umsindo ezingeni
Omunye izinzuzo air wokuhlanza encane amandla ukusetshenziswa, ngokuvamile of 50-70 Watts, kuyilapho onobuhle eziphansi ezisebenzisa zabathengi isidingo - 20-35 Watts.
Futhi uzinake yizinga eliphansi umsindo, okuyinto ebaluleke ngoba abaningi emoyeni wokuhlanza ukusebenza bengaphumuli, kuhlanganise ebusuku ekamelweni. Ngo iyiphi idivayisi umsindo zokuhlambuluka ngokuvamile fan, futhi abakhiqizi sacabanga ngayo, ukudala lokubolekwa mode ebusuku uma sehliselwe inombolo okungenani fan ukujikisa, futhi umthamo kuyinto 37 dB. umsindo okunjalo akuyona siyaphazamisa futhi kungaphazamisi ubuthongo. Ngaphezu kwalokho, kungase kuxhomeke samuntu esetshenziswa izihlungi.
Ngokwesibonelo, ukwenza emoyeni ukusebenzisa ngokusebenzisa le lemifanekiso HEPA, fan udinga amandla angaphezulu, futhi ngaleyo ndlela ezinomsindo ngaphezulu. Nokho, abakhiqizi zithi kunomsindo ingaphezu value standard. Kukhona umoya wokuhlanza ukuze indlu nge operation cishe buthule ebusuku (in the «Ukulala» Imodi). Ivolumu Kulokhu - 16 dB kuphela.
Likuphi purifier emoyeni ngoba ifulethi?
Izibuyekezo Customer bathi zokuhlanza kakhulu ogibele iwindi sill, phansi kwetafula, nightstand, njll Amanye amadivayisi kungenziwa hung phezu komduli.
Izinketho ezingeziwe nemisebenzi
Nazi ezinye anezele ukuthi sathembisa ekuqaleni isihloko bhala. Siyabonga kubo ukusetshenziswa umshini ukuze bahlanze emoyeni iba elula kakhulu futhi kujabulise:
Isikhathi - esetshenziswa ukuvala kumadivayisi ezifana emoyeni zokuhlanza for zokuhlala, ukufakwa kanye nokusebenza nezikhathi.
Isilawuli kude - kudingeka ushintshe izindlela insimbi.
Ukulungisa ijubane fan Ukujikeleza - le ndlela isetshenziswa ukuze ushintshe izindlela vacuum emoyeni, isibonelo, mode ebusuku, ngaleyo ndlela kuncishiswe nesivinini ubuncane futhi umsindo ezingeni. Kukhona izindlela «Ukulala», «Turbo», njll
Kwemoya imitshina - efakwe kwezinye tinkhulumo, isibonelo ku-purifier emoyeni ngoba yokungezwani komzimba abagulayo, asetshenziswa ukunquma degree lokungcoliswa komoya ngo uthuli noma umoya. Uma kwenzeka yokudlula ezingeni izinto eziyingozi ku "buka" we umtshina iyunithi icushiwe ngokuzenzakalelayo. ukungcoliswa umtshina futhi ilawula ukushuba fan, ngokwandisa noma ukunciphisa ke Inzuzo
Khombisa. Iningi purifier emoyeni ifakwe okucaciswe luketshezi, ukubonisa idatha izindlela kanye nesikhathi zedivayisi;
Izinkomba Zesikhathi. Ngezinye izikhathi umoya wokuhlanza ukuze efulethini ayizikhombisi ezengeziwe asetshenziselwa ukubonisa imininingwane ebalulekile mayelana nomsebenzi we-idivayisi. Amadivayisi anjalo ngokuvamile anemisila isimo sezulu singekho.
Aromatization. isithokela Akuphoqelekile itholakala emoyeni wokuhlanza amakilasi ezahlukene. Amadivayisi kungenziwa ifakwe i ukunambitheka ezengeziwe, nakuba khona layo akudingekile. Kungenziwa ngokuzimela ukungezwa amanzi izinto enamakha ngaphandle idivayisi Wiper evumela ukuba sizisebenzise.
Imithetho okusebenzela purifier emoyeni
Abakhiqizi ukuncoma umoya wokuhlanza enze esikhundleni esifike izihlungu ukuqedela ukusebenza.
Endabeni ka iphunga elibi kudingeka esikhundleni izihlungi ngaphambi kokuphela isicelo sabo. Uma umoya eqhukethe ukungcola, kubalulekile ukugeza izihlungi kaningi noma ushintshe.
Ngisho emoyeni wokuhlanza eziphambili kakhulu futhi enamandla, ngeshwa, musa bazogcwalisa emoyeni nge-oksijini, ngakho udinga pholisa njalo egumbini.
Wena ukuphefumula lula!